खुकुलो बनाइयो उपत्यकाको निषेधाज्ञा : के खुल्ने, के नखुल्ने ? | Samajik Khabar
Home मुख्य खुकुलो बनाइयो उपत्यकाको निषेधाज्ञा : के खुल्ने, के नखुल्ने ?
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ, तर अघिल्ला हप्ताहरुमा भन्दा केही खुकुलो बनाइएको छ ।
काठमाण्डाै उपत्यकामा निषेधाज्ञा भदौ २४ गते राती १२ बजे सम्मलाई लम्बियो
११२० जनामा काेराेना सङ्क्रमण, १२ जनाकाे ज्यान गएकाे पुष्टि
Previous articleलकडाउनको पिरलो : काठमाडौको कोठा म के गरौ ?
Next articleपबजीसहित थप ११८ एपमाथि प्रतिबन्ध